Xiaomi Mi 11T Pro: atụmatụ enwere ike, nkọwapụta, ọnụahịa na ụbọchị mwepụta | Androidsis
Xiaomi Mi 11T Pro: atụmatụ enwere ike, nkọwapụta, ọnụahịa na ụbọchị mwepụta
Xiaomi na -akwado mwepụta nke ekwentị ọhụrụ, ọ bụ maka ekwentị My 11T Pro, ekwentị mkpanaaka na-arụ ọrụ nke ga-abụ akụkụ nke usoro kachasị elu nke onye nrụpụta China ruo taa.
Ma ọ bụ na a na -ekwula ọtụtụ okwu banyere ya njirimara na nkọwa nka nke ngwa a, yabụ na anyị amatala ihe anyị ga-atụ anya ya, yana nkọwa nke ọnụahịa ọ ga-ekwe omume na ụbọchị mmalite nke ekwentị a dị elu ga-anya isi.
1 Njirimara na nkọwa teknụzụ niile anyị maara ruo Xiaomi Mi 11T Pro
2 Ọnụahịa na ụbọchị mwepụta nke Xiaomi Mi 11T Pro
Njirimara na nkọwa teknụzụ niile anyị maara ruo Xiaomi Mi 11T Pro
Dabere na nkọwapụta na nkọcha ndị pụtara ọhụrụ, Xiaomi Mi 11T Pro ga -abụ ekwentị ga -eji ihuenyo teknụzụ AMOLED nke ga -enwe ezigbo ume ọhụrụ nke 120 Hz. Nke a ga -eme ka ịdị nro na ịdịnwụ dị ukwuu ma a bịa n'ịgagharị na ngwa, ime ngwa na egwuregwu, yana ịrụ ọrụ ọ bụla ọzọ n'ihe gbasara ọdịnaya mgbasa ozi.
N'echiche a, Xiaomi Mi 11T Pro ga -enwe panel nwere okpokolo agba belatara, dịka anyị nwere ha n'ụdị dị iche iche nke My 11. Na mgbakwunye, ọ ga -enwe oghere na ihuenyo dị n'akụkụ aka ekpe elu, n'ụlọ ihe mmetụta igwefoto n'ihu nke nwere ike ịbụ mkpebi 20 MP, dị ka nke mbụ Mi 11, yabụ na akụkụ a agaghị enwe mgbanwe ọhụụ.
Banyere igwefoto n'azụ ekwentị a, Xiaomi Mi 11T Pro ga -eji, dị ka akụkọ si kwuo, sistemụ okpukpu atọ nke enwere ike ịhọrọ onye na -agba egbe 108 MP. Agbanyeghị, ekwuru na ekwentị a nwere ike nwee mkpebi 64 MP dị ala, n'agbanyeghị na nke a yiri ka ọ yighị ka ọ dị obere. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ka ga -ahụ ya.
Banyere ihe mmetụta foto ndị ọzọ, ekwentị ahụ ga-enwekwa modulu atọ nwere oghere ihu nwere 13 ma ọ bụ 8 MP yana igwefoto nnukwu 5 MP. Ọ bụrụ na ọ ga -abịa na modul quad, ihe mmetụta ikpeazụ nwere ike ịbụ 2 MP ma nyefee ya maka mmetụta blur n'ọhịa. Na mgbakwunye na nke a, ekwentị ga -enwekwa ọkụ ọkụ okpukpu abụọ nke ọkụ maka ihe nkiri abalị na ebe ọkụ adịghị mma.
Chipset processor nke ekwentị a ga -eji ga -abụ Qualcomm Snapdragon 888, mpempe nwere oke ike nke na-enye arụmọrụ klaasị, na-eme mkpanaka a ka ọ bụrụ ọkwa zuru oke. Na SoC a nwere ike ịrụ ọrụ n'ogo kacha elekere 2.84 GHz. N'aka nke ya, ọ na-abịa na Adreno 660 GPU, nke kachasị ike maka ọdịnaya mgbasa ozi na egwuregwu dị elu.
N'aka nke ọzọ, a ga -ahapụkwa ekwentị a yana a Ebe nchekwa RAM nke ikike 6 ma ọ bụ 8 GB. Ọ ka ga -ahụ ma ọ ga -adị na ụdị abụọ a, yana ọ bụrụ na a ga -enyekwa ya na 128 na / ma ọ bụ 256 GB nke ebe nchekwa. N'ezie, atụghị anya na ọ ga -eji nkwado maka mgbasawanye ebe nchekwa site na kaadị microSD, ebe ọ bụ site na usoro Mi 10 ruo Mi 11, nke bụ nke dị ugbu a, anaghị ahụ nke a ebe ọ bụla.
N'aka nke ọzọ, batrị ga -enwe ike nke 5,000 mAh, nke a mara mma nke ukwuu. N'ezie, nke kachasị mma adịghị na ya, mana na teknụzụ chaja ngwa ngwa nke Xiaomi Mi 11T Pro ga -adakọrịrị, nke bụ 120 W. Site na nke a, a ga -ebo batrị site na ihe efu ka ọ zuo n'etiti nkeji 30 na 40. Ntinye, n'ezie, ga -abụ ụdị USB.
Njirimara ndị ọzọ nke Xiaomi Mi 11T Pro ga-agụnye onye na-agụ akara mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo yana sistemụ arụmọrụ gam akporo 11 n'okpuru MIUi 12.5 dị ka nhazi nhazi. Ihe ọzọ ekwentị ga -enwe bụ njikọta 5G, ebe Snapdragon 888 nke ọ ga -enwe n'ime ya na -abịa na modem agbakwunyere nwere ike ịkwado netwọkụ a.
N'ezie, ọ gaghị enwe nguzogide mmiri, mana a ga -echebe ya Corning Gorilla Glass VictusIko kacha sie ike Corning ruo taa; a ga -akwadebe ya n'azụ yana, n'ezie, n'elu ihuenyo ngwaọrụ ahụ. Ọ ga -abịa na NFC maka ịkwụ ụgwọ na -enweghị kọntaktị, ịkwụghachi ụgwọ, yana ihe mmetụta infrared maka ijikwa ngwaọrụ mpụga dịka telivishọn na ndị ọzọ.
Ọnụahịa na ụbọchị mwepụta nke Xiaomi Mi 11T Pro
A na-atụ anya ekwentị a ka ọ bụrụ nke dị elu, mana nwere ọnụ ahịa dị ọnụ ala, ma e jiri ya tụnyere Mi 11 na Mi 11 Pro.Ya mere, anyị na-ekwu maka nke ahụ ọ nwere ike kụrụ ahịa ihe dị ka euro 600. Agbanyeghị, ọ nwere ike buru ụzọ bido ya na China, ọnụ ahịa ahụ ga -abụ nke ga -adaba na mgbanwe nke oge a. Na mgbakwunye, Septemba 23 bụ ụbọchị ezubere maka mwepụta ya zuru ụwa ọnụ, n'agbanyeghị na anyị ga -akwado ma ọ bụ gbaghaa ma emechaa ma ọ ga -ebido n'ezie n'ụwa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi Mi 11T Pro: atụmatụ enwere ike, nkọwapụta, ọnụahịa na ụbọchị mwepụta